ईशा गुप्ता, एली अवराम र उर्वशी रौलेतापछि यि नायिकाको प्रेममा क्रिकेटर हार्दिक, कति समय टिक्ला ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
ईशा गुप्ता, एली अवराम र उर्वशी रौलेतापछि यि नायिकाको प्रेममा क्रिकेटर हार्दिक, कति समय टिक्ला ?
एजेन्सी । क्रिकेटर हार्दिक पाण्डया प्रेम र रोमान्सका कारण सदावहार रुपमा चर्चामा नै रहने खेलाडी हुन् । विशेषगरी उनी सुन्दरी युवतीहरुको मायाजालमा परेकै कारण समाचारमा छाइरहन्छन् ।
अहिलेसम्म कैयौँ अभिनेत्रीको मन चोरिसकेका हार्दिकले ईशा गुप्ता, एली अवराम र उर्वशी रौलेतासँग प्रेमका नाममा रोमान्स गर्न सफल भएका छन् । ईशा गुप्ता, एली अवराम र उर्वशी रौलेतापछि हार्दिक अहिले नताशा स्टेनकोविकसँग रोमान्स गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार नताशा र हार्दिकको बीच लव अफेयर सुरु भएको छ ।
हालैको एक पार्टीमा हार्दिकले नताशालाई लिएर गएपछि अहिले उनीहरुका तस्विरहरु भाइरल भइरहेका छन् भने सम्बन्धको चर्चासँगै डेट गरिरहेको रहस्य पनि बाहिर आएको हो । नताशा अहिले ‘नच बलिए’ मा एक्स ब्वाययफ्रेन्ड एली गोनीसँग देखिएकी छन्। उनको नाम प्रियांक शर्मासँग पनि जोडीएसँगै मिडियामा छाएकी थिइन् ।